खोइ किटनाशक धुलो र पाउडर छर्किएको? « रिपोर्टर्स नेपाल
खोइ किटनाशक धुलो र पाउडर छर्किएको?
काठमाडौं, चैत १३ । कोरोनाबाट प्रभावित अन्य मुलुकहरुमा कोरोनो नियन्त्रणको लागि किटनाशक घोल र पाउडरको प्रयोग बढ्दो छ। सार्वजनिक ठाउँहरुलाई सुरक्षित राख्न यस्ता पाउडर र घोलको प्रयोग हुन्छ।
यसलाई डिसइन्फेकटेन्ट मेडिसिन अथार्त् किटाणु मार्ने औषधि पनि भनिन्छ। नेपालमा भने अस्पताल र संवेदनशील ठाउँहरुमा समेत क्लोरिनयुक्त पाउडर र घोलको प्रयोग भएको पाइँदैन। कोरोना भाइरस फैलने त्रास हुँदाहुँदै पनि किटनाशक पाउडर र घोल प्रयोग नहुनु दुखद रहेको यससँग सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन्।
सेन्टरले किटनाशक औषधि उत्पादन र यसको बिक्रि वितरण गर्दै आइरहेको छ। सेन्टरका अध्यक्ष भरत आचार्यले आफूले विदेशमा गरेको आएको कामलाई नेपालमा सुरु गरेको बताए। उनका अनुसार पानी र क्लोरिनको प्रयोग गरेर किटनाशक औषधि बनाउन सकिन्छ। जसलाई सार्वजनिक र कोरोना भाइसर फैलन सक्ने सम्भावित ठाउँहरुमा छर्कन सकिन्छ।
यो घोल वा पाउडर सर्किएपछि भाइरस मर्छन्। ‘किटनाशक घोल र पाउडर बनाउन त्यति झन्झट छैन, हामीले विदेशबाट केही मेसीन पनि ल्याएका छौं, अहिले यस्तो घोल बनाइरहेका छौं, तर प्रयोग चाही भएको छैन,’ अध्यक्ष आचार्यले भने। उनले घोल वा पाउडर छर्कनको लागि भ्यान बनाइसकेको र त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने बताए। आचार्यले यस्तो उपायलाई घरेलु उपायका रुपमा लिन सकिने जानकारी दिए।नागरिक दैनिकबाट